အောက်တိုဘာ 2017 » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
Month: အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇
အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ မေ ၃၁၊ ၂၀၂၀
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယ ရေတပ်မှ Vice Admiral Bimal K Verma, AVSM, Commander in Chief of Andaman and Nicobar Command ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E.Mr. Don Pramudwinai တို့ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ နယ်နိမိတ်အရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရ ခွဲခြားမရနိုင်သော အိမ်နီးနားချင်းကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှု များကြောင့် ကြီးမားသည့် နယ်စပ်ပြဿနာများမရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်ပိုင်းတွင် Regional Border Committee အဆင့်မှသည် High
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Don Pramudwinai ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. Mr. Don Pramudwinai ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့်
အောက်တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၇ မေ ၃၁၊ ၂၀၂၀
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ -၂၇ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများ၏ သတ္တမအကြိမ် မဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) အနော်ရထာခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ -၂၇ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းသည် သဘာဝတရားကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်းဖြစ်၍ ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းသာမက လူတိုင်းလူတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြရန်တာဝန်ရှိကြောင်း၊ သဘာဝတရားက ပေးအပ်လိမ့်မည်ဟု အားကိုး နေ၍မရဘဲ မိမိတို့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကို နှစ်စဉ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင် သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊
စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅၉) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနားကျင်းပ